E kwuputala ntọhapụ nke Gnome 3.38 ma ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke mmepe, Ndị otu Gnome nwere obi ụtọ ịkpọsa ntọhapụ nke mbipute ọhụrụ nke desktọọpụ "Gnome 3.38" na e jiri ya tụnyere mbipute gara aga, emere mgbanwe puku 28, na mmejuputa nke ndị mmepe 901 sonyere.
Nke isi akwukwo ohuru na-adade ke ọhụrụ a version, bụ na akụkụ dị iche iche a chọrọ n'elu maka ngwa a na-ejikarị eme ihe ejirila nchịkọta nchịkọta dochie anya ya nke na-enye gị ohere ịhazigharị ngwa ma kesaa ha na folda nke onye ọrụ mepụtara.
Dọrọ na idobe ngwa na-eme site na ịmegharị òké mgbe ị na-ejide bọtịnụ ịpị.
Mgbanwe ọzọ anyị nwere ike ịhụ ozugbo na ụdị ọhụrụ nke Gnome 3.38 a bụ Nabata Walkthrough gosipụtara mgbe onye ọrụ na-abanye na mbụ mgbe ha mechara ntọala mbụ. Interface ahụ na-achikota ozi banyere isi atụmatụ nke desktọọpụ ma na-enye njem mmeghe na nkọwa nke ụkpụrụ ọrụ. Edere ngwa ahụ na Rust.
Na nhazi, na ngalaba nlekọta onye ọrụ, ugbu a ị nwere ike ịtọ njikwa ndị nne na nna maka akaụntụ oge niile. Maka onye ọrụ enyere, ịnwere ike igbochi ụfọdụ mmemme arụnyere na igosi na ngwa ngwa. Njikwa nne na nna a tinyekwara ya n'ime Njikwa Ngwa Ngwa na-enye ohere ikwe ka echichi nke naanị ahọpụtara mmemme.
Onye nhazi ahụ na-eweta a ọhụrụ akara mkpisiaka scanning interface maka nyocha site na ihe mmetụta sensọ.
Tụkwasị na nhọrọ igbochi ebighị nke USB ngwaọrụ enwetaghị ikike òtù ejikọrọ n'oge mkpọchi ihuenyo.
Ngwaọrụ nyocha na GNOME Shell emezigharị iji jiri ihe nkesa mgbasa ozi PipeWire na Linux kernel API iji belata njiri akụ ma melite nzaghachi mgbe ị na-edekọ.
Na nhazi ọtụtụ nyocha ndị na-eji Wayland, enwere ike ikenye uzo di iche iche ihuenyo melite ọ bụla ileba anya.
Ngwanro Emegharịrị Gnome Maps maka iji ya na ekwentị. Na ọnọdụ onyonyo onyonyo satịlaịtị, a na-enye ikike igosipụta akara. Agbakwunyere nkwado maka na-enyere ikiri eserese na ọnọdụ abalị.
Mkparịta ụka gbanwere ịgbakwunye elekere ụwa, nke na-egosiputa oge na-echeba oge mpaghara na ọnọdụ enyere. Na elekere oti mkpu, agbakwunyela ikike ịtọ oge nke mgbaama ahụ na oge n'etiti etiti mkpu ugboro ugboro.
Na egwuregwu nke Gnome, nsonaazụ ọchụchọ ka egosipụtara ugbu a na ọnọdụ nyocha, na-enye gị ohere ịmalite egwuregwu ị na-achọ ozugbo.
Igbe Gnome, na-agbakwunye nkwado maka edezi faịlụ XML mebere igwe maka gbanwee ntọala libvirt dị elu nke na-adịghị na ọkọlọtọ onye ọrụ interface. Mgbe ị na-ekepụta igwe ọhụụ, igbe na-enye gị ohere iji aka gị họrọ sistemụ ma ọ bụrụ na enweghị ike ịchọpụta ya na akpaghị aka.
Enweela akara ngosi ọhụrụ maka Calculator, Chiiz, Tali, Sudoku, ígwè ọrụ na-, Quadrapassel na Nibbles webcam software.
Ọnụ emulator emelitere atụmatụ agba maka ederede. Agba ndị ọhụrụ na-enye nnukwu ọdịiche ma mee ka ederede dị mfe ọgụgụ.
Foto GNOME na - agbakwunye ihe oyiyi ọhụrụ, Trencin, nke yiri ihe nlele Clarendon na Instagram (na-enwupụta isi ma na-agba ọchịchịrị ebe).
Agbakwunyere nyocha ohuru nke ihe nyocha Tracker 3 nke a sụgharịrị ọtụtụ n'ime ngwa GNOME ndị bụ isi. Versiondị ọhụrụ ahụ na-ewebata mgbanwe iji melite nchebe iji kewapụ ngwa ewepụtara na usoro Flatpak site na ikwe ka njikwa ihe doro anya na ihe data ngwa nwere ike ịjụ ma depụta maka ọchụchọ.
Fractal, onye ahịa nke usoro mgbasa ozi nkwukọrịta nke Matrix, emeela ka ọkpụkpọ vidiyo ka mma site na ịlele akụkọ ihe mere eme; video preview thumbnails ugbu a na-egosipụta ozugbo na akụkọ ihe mere eme ozi ma gbasaa na vidiyo zuru ezu na pịa.
N'ikpeazụ, ọ fọdụrụ naanị ichere na nke ọhụrụ a version ugbua dị na ọwa gọọmentị nke nkesa Linux masịrị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » E kwuwela ọkwa nke Gnome 3.38 ma ndị a bụ akụkọ ya